कोमल वली र रामहरी खतिवडा विवाहको अन्तिम तयारीमा ! - समृद्ध नेपाल
कोमल वली र रामहरी खतिवडा विवाहको अन्तिम तयारीमा !
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा ले बुधबार काठमाडौंको भृकुटिमण्डपमा भव्य चियापान कार्यक्रम आयोजना गर्यो । बडादशैं, तिहार, छठ, नेपाल संवत ११४० तथा सम्पूर्ण चाडपर्वको अवसरमा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान तथा चियापान कार्यक्रममा सत्तारुढ नेकपाकादेखि प्रतिपक्षी कांग्रेससम्मका नेता कार्यकर्ताहरुको भीड लागेको थियो ।
दिउँसो १२ बजे सुरु भएको चियापान कार्यक्रममा विभिन्न नेता, कार्यकर्ता, शुभचिन्तक, संचारकर्मी आ–आफ्नै विषय र चासोसंग रमाइरहेका देखिन्थे । ठाउँठाउँमा केही नेता कार्यकर्ताहरु भेटघाट गरिरहेका हुन्थे । ठूला नेताहरुलाई नमस्कारको ओइरो देखिन्थ्यो ।
केही चियाको चुस्किसंगै गफ्फिरहेका थिए भने केही मिठाइ र फलफुल खाँदै गरेका देखिन्थे । संचारकर्मीहरु कुनै शीर्ष तहका नेताहरुलाई देख्नेबित्तिकै झुरुप्प छेकेर प्रश्न तेस्र्याउन भ्याइनभ्याइसंग दौडधुप गरिरहेका थिए । भृकुटिमण्डपस्थित खुल्ला चौरमा आयोजना भएको उक्त कार्यक्रमस्थलको एकापट्टि समारोहस्थल बनाइएको थियो । जहाँ मिडियाकर्मी र उच्च पदस्त बाहेकका अन्यलाई प्रवेश थिएन् ।
उक्त कार्यक्रमस्थलमा उभिइरहेका थिए, नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरी खतिवडा । खतिवडा उभिएकै ठाउँमा केहीबेरपछि नेकपाकी राष्ट्रिय सभा सदस्य सांसद कोमल वलिको इन्ट्रिले केहीबेर संचारकर्मीलाई त्यसतर्फ तान्यो ।
वली र खतिवडालाई केही संचारकर्मीले घेरे । सुरुमा प्रश्नकर्ता नेकपाको चियापानमा केन्द्रीत थिए । सांसद वलीले परमपरा जोगाउन, कार्यकर्ताबीचको सम्बन्ध उचाईमा पुर्याउन र आपसी मेलमिलापका लागि चियापानको महत्व दर्साइन् । एक्कासी, एक संचारकर्मीले वलीलाई प्रश्न गरे–‘कोमल वलीको विवाह कहिले हुन्छ ? जनता जान्न चाहन्छन् ।’
कोमल वलीले यतिबेला चियापान र शुभकामना आदानप्रदानको समय भएको भन्दै विवाहको विषयमा त्यति बोल्न चाहिनन् । तर ती संचारकर्मी भने विवाहमै केन्द्रीत भएर प्रश्न गर्न थाले । आफू विवाहको बारेमा भन्दा पनि एक बफादार कार्यकर्ताको रुपमा नेकपाको कार्यक्रममा चिनिने तर्क वलीले गरिन् ।
भरतपुर महानगरद्वारा घरबाटै बिरामीलाई अस्पतालसम्म ल्याउने व्यवस्था !
अख्तियारमा हाम्रा मान्छे नपरे ढिलो-चाँडो जेलकै बास हुन्छ : प्रचण्ड-माधव नेपाल समुह !
राजतन्त्र नै अन्तिम विकल्प हो : मनिषा कोइराला
कसैलाई चोइटिन मन लागे बालकोट गए हुन्छ: माधव नेपाल
विना सर्त प्रहरीले रिहा गरेपछि रामकुमारी झाँक्रीले प्रहरी परिसरमै भनिन्, ‘मलाई कुनै पश्चाताप छैन, अझै बोलिरहन्छु’
आफ्नो गल्ति स्वीकार गर्दै प्रचण्ड अब ४ बर्ष काठमाडौंमा नबस्ने घोषणा !
काठमाडौं हिँडेकी उपमेयर अमेरिकामा पुगेपछि !
तरुण दलले भने खेलकुद मन्त्री र राखेपका सदस्य सचिवलाई बर्खास्त गर्नु पर्छ !
राजनीतिमा आए रमेश खरेल, भोलि नयाँ पार्टी गठनको घोषणा गर्ने
एक सय भन्दा बढी नेकपाका नेता कार्यकर्ता कांग्रेसमा
महराको राजनीतिक सक्रियताले पोखरेलको ‘रजगज’ मा बाधा पुग्ने
नेपाली कांग्रेस–कार्यकर्ताका सात यी ‘खराबी’ हेर्नुहोस के के हुन् !
नेकपामा नभएको भन्दै दलको निर्देशन नमान्ने : महरा